China Lightweight Vulcanizing Press yeChiedza Rubber Conveyor Belt fekitori uye vagadziri | Antai
Yakareruka Vulcanizing Press yeChiedza Rubber Conveyor Belt
Lightweight rubber conveyor belt vulcanizing press, 2-chidimbu kudhinda, aluminium furemu dhizaini, yakagadzirirwa kukurumidza uye nyore mashandiro, nyore kutamira kune chero chinodiwa splice chinzvimbo, chakareruka uye chakakwira basa kugona. S
Iwo maviri mwenje uye akasimba aruminiyamu mafuremu ane epamusoro uye ezasi zvikamu zvemuchina. Yakagadzirirwa mabhendi maviri akapetwa pamativi ese epamusoro furemu, zviri nyore kukwira kumusoro uye pasi. Iyo yekudzora bhokisi inoratidzira hunyambiri tembiricha kutonga, timer uye chiratidzo system.
Yakagadzirirwa kutsanya uye yakavimbika bhandi kubvarura;
Yakasimba aruminiyamu furemu chimiro;
Chiedza chisina kuremerwa, inotakurika furemu muchina;
Kurumidza kupisa system, shandisa yakavimbika Silicone Heating Elements;
Inokurumidza kutonhora sisitimu inosanganisirwa muplaten dhizaini, kutonhora pasi kubva pa145 ° C kusvika 75 ° C, chete 5 mins.
Kureba Kwenzvimbo (mm)
Zvishandiso Kureba (mm)
Platen Upamhi (mm)
Platen uremu (kg)
Icho chishandiso chinopisa uye chishandiso chekugadzirisa & kupaka kwebhandi rekutakura.
Inokodzera mabhandi akasiyana siyana ekuendesa, akadai se EP, Rubber, Nylon, Canvas uye Simbi tambo bhandi, nezvimwe.
Pashure: Mhepo yekumanikidza mvura yakanyorova vulcanization muchina
Zvadaro: PU PVC Belt Vulcanizing Press ye Thermoplastic Belt Splice
Mucheka Wekufambisa Belt Vulcanization Press
Simbi Cord Conveyor Belt Vulcanization Press